धमलाको प्रश्न, निधीलाई हराउन सक्नु हुन्छ? महतोको उत्तरः मधेशी जनताले सही फैसला गर्नेछन ! « Today Khabar
धमलाको प्रश्न, निधीलाई हराउन सक्नु हुन्छ? महतोको उत्तरः मधेशी जनताले सही फैसला गर्नेछन !
प्रकाशित २१ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०५:४५
मधेशी जनताको हितमा काम गरेको दाबी निधीले गर्नुभएको छ । तपाईले आरोप लगाएर मात्र हुन्छ र?
विमलेन्द्र निधी र राजेन्द्र महतोबिचमा व्यक्तिगत रिसिइवी छ र?
निधीले त संविधान संशोधन गरेर मधेशीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर संविधान संशोधनको प्रयास गर्नुभएको होइन र?
प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ३ सय ८८ भोट ल्याउन सक्नेले संविधान संशोधन गर्नका लागि किन ल्याउन सकेन रु अहिले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेर हुँदैन ।